Natsipy: Ny vahaolana momba ny marketing amin'ny atiny Audio ho an'ny marika orinasa | Martech Zone
Nivoatra avy amin'ny hevitra fa ny resaka dia tokony ho andalana ho an'ny atiny marketing rehetra, Natsipy no hany sehatra marketing ho an'ny atiny natsangana hanomezana alalana ny mpivarotra hiditra, hanamafisana ary hanomezana ny atiny podcast marika hamelomana ny paikadim-barotra momba ny votoatiny iray manontolo.
Tsy toy ny vahaolana marketing amin'ny atiny hafa, izay namboarina hanampiana ireo mpivarotra hamoaka atiny voasoratra bebe kokoa, Natsipy ahafahan'ny mpivarotra mahomby sy mahomby kokoa amin'ny alàlan'ny fanatontosana ilay fomba audio-first. Miaraka amin'ny sehatra Casted, ny mpivarotra dia afaka mampiasa ny herin'ny resaka fiforonana mba hamoronana atiny manankarena sy mifandraika ary atokisan'ny manam-pahaizana izay manome tanjona ary manome valiny voaporofo.
Famintinana ny 3 A
Ny dingana voalohany dia ny firaketana an-tsoratra resadresaka amina manam-pahaizana momba ny lohahevitra. Avy any, ny atin'ny fifampiresahana dia tsy vitan'ny famoahana podcast fotsiny, fa koa hamoahana ireo loharanom-pahalalana marobe toy ny lahatsoratra bilaogy, atiny media sosialy, eBooks sy maro hafa.
Casted dia manome ny mpivarotra fiverenana marina amin'ny fampiasam-bola podcast amin'ny alàlan'ny fampitomboana fidirana amin'ny atiny audio hampiasain'ny mpikambana ao amin'ny ekipa, departemanta ary mpiara-miombon'antoka masoivoho. Manome fomba maro ny sehatra hanamafisana izay atiny manerana ny fantsona hafa. Farany, Casted manome mbola tsy nisy toy izany Attribution izay manambara ny fiantraikan'ny atiny amin'ny marika sy ny orinasa.
fidirana: Ampiasao ny herin'ny fahitana azonao avy amin'ny resaka nifanaovana tamina manampahaizana manokana momba ny indostria, mpanjifa, mpitarika anatiny, mpiara-miasa ary maro hafa amin'ny podcast-nao amin'ny alàlan'ny fanaovana ny atiny ho azon'ny mpikambana ao amin'ny ekipa, departemanta ary mpiara-miombon'antoka.
Manatsara: Mamily ny resaka rehetra ao anaty atiny tsy manam-paharoa izay manan-karena amin'ny fomba fijerinao sy ny fahaizanao ho an'ny sanda faratampony ho an'ny mpihaino anao hampiasaina amin'ny fantsona marketing rehetra.
toetra: Fantaro ny fiantraikan'ny marika podcast anao amin'ny orinasanao amin'ny angon-drakitra azo ampiharina toy ny isa fampidirana sy ny fanadihadian'ny mpihaino.
Amin'ny alàlan'ny fidirana ao anaty atiny podcast, ny tanjona dia ny hametrahan'ny mpivarotra paikady mirindra kokoa, iray tarihin'ny loharano (podcast) efa anisany fotoana sy ezaka.
Atombohy amin'ny resaka iray
Avy amin'ny sehatra afovoany, ny ekipa marketing dia afaka mampiasa ny fomba fijery tsy manam-paharoa nambara tamin'ny resadresaka nifanaovana tamina manam-pahaizana - tsy hoe fizarana podcast ihany fa ho fandrehitra ireo fantsom-barotra marobe hafa koa.
voalohany, Natsipy dia miasa ho toy ny sehatra fampiantranoana podcast an'ny marika, mamoaka ny fizarana tsirairay amin'ny podcast mpilalao toa an'i Apple, Spotify, ary Google, ary mamorona trano ho an'ny seho ao amin'ny tranonkalan'ny marika manokana amin'ny alàlan'ny pejy noforonina mivantana tao amin'ilay lampihazo.
Avy any, Casted dia mihoatra lavitra ny fampiantranoana sy ny fanaovana syndika hanomezana fidirana mora amin'izany atiny audio izany mba hanatsarana ny fiaraha-miasa manerana ny ekipa mba hampitomboana ny hafatra isaky ny fizarana amin'ny alàlan'ny fanamafisana izany amin'ireo fantsona hafa. Anisan'izany ireo pejy fampisehoana azo ovaina, fandikana an-tsoratra hanohanana ny SEO sy atiny fanampiny fanoratana, fametahana sary ary famoronana audiogram ho an'ny media sosialy, fampidirana anaty atiny web sy mailaka, fampidirina amin'ireo sehatra toa ny HubSpot, Drift, ary WordPress, ary maro hafa.
Ary farany, Casted dia manome refy momba ny firotsahan'ny mpihaino, manampy ny mpivarotra hahatakatra sy hizara ny fiantraikan'ny podcast sy ny atiny mifandraika amin'ny marika sy ny orinasa.
Ampiasao ny Podcasting ho toy ny throughline
Eo afovoany, ny podcasting marika dia marketing volamena: resaka marina amin'ireo manam-pahaizana izay manambara ny hevitra tany am-boalohany, ny hevitry ny mpanatanteraka ary ny tantaran'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny fomba fijery matanjaka toy izany, ny podcast dia tokony ho ivon'ny tetikadin'ny marika iray, handrehitra atiny hafa rehetra.
Matetika loatra anefa dia mampanginina ireto podcast ireto. Ny atin'ny raki-peo dia mihidy amin'ny sisa amin'ny atin'ny marika ary avela tsy voatondron'ny sisa amin'ny fikambanana. Fa maninona Satria ny fitaovana podcast dia tsy natao ho an'ny ekipa marketing ary tsy natao hiasa amin'ny podcast ireo sehatra marketing. Tsy misy fomba mora hidiran'ny ekipa amin'io atiny io sy ampiasana azy amin'ny fantsona hafa.
Enter Casted, ilay hany sehatra marketing ho an'ny atiny natsangana hanomezana alalana ireo mpivarotra hiditra, hanamafisana ary hanomezana ny atiny podcast ho solika amin'ny paikadim-barotra momba ny votoaty iray manontolo. Miaraka amin'ny fomba voalohany-peo amin'ny marketing amin'ny atiny, ny podcasting marika dia toy ny andalana mankany amin'ireo fantsona atiny hafa rehetra.
Ny fifanakalozan-kevitra dia manamora ny fifandraisana tsy eo amin'ireo olona tena misy resaka fotsiny, fa amin'ny olona rehetra mihaino azy koa. Ny mpihaino dia mifamatotra amin'ny olombelona manao an'io resaka io ary koa amin'ny marika ao ambadik'izany rehetra izany.
Ireo fifandraisan-davitra ireo dia mampisy solika. Rehefa mahatsapa ny fifandraisany amin'ilay marika ireo mpijery ireo dia azo inoana fa hitohy ho lasa mpanjifa. Raiso ity fandalinana nataon'ny Namarana ny BBC:
Ny marika voalaza ao amin'ny podcast dia manome salanisa:
Fandraisana andraikitra 16% avo kokoa sy 12% ambony noho ny atiny manodidina. Vokany tsy manam-paharoa izany, satria ny benchmarks amin'ny radio manerantany dia mampiseho fa ny marika dia manonona isa 5% ambany noho ny atiny.
Ny toetra akaiky sy ifanakalozan-kevitra eo amin'ny tontolon'ny podcast dia miteraka fisondrotana fiakarana avoakan'ny marika. Izy io koa dia mitarika ny metrikan'ny marika manerana ny solaitrabe, manampy amin'ny fampisondrotana ny fahatsiarovan-tena (↑ 89%), ny fiheverana ny marika (↑ 57%), ny fankasitrahana ny marika (↑ 24%), ary ny fikasana hividy (↑ 14%).
94% ny mpihaino mandany podcast raha manao asa hafa
Mihaino podcast ny olona ary manapaka ny bozaka, mandeha an-tongotra, mivalona manasa lamba, na miasa aza. Midika izany fa ny marika izay mamorona podcast mahaliana sy mahaliana dia manana fahaizana manokana fotoana fanampiny amin'ny mpihaino azy.
Alaharo ny Demo anio
Tags: fidiranatoetratenyatiny audionatsipyContent Marketingorinasavahaolana podcast orinasapodcast itystatistika podcastpaikady podcastpaikady podcastsyndication podcastpodcastingSyndicationlahatsary